Mampihatra an’io ny synodam-paritany faritra Atsinanana izay misahana Fileovana 36 eo amin’ny sahan’ny finoana loterana malagasy. Tao anatin’ny roa andro tamin’iny herinandro lasa iny dia nojerena ny pitsopitson’asa rehetra ahafahan’ny katekista miditra ho mpikambana feno ao amin’ny CNaPS. Tao Ranomena renivohitry ny kafe robusta ahitana ny Fileovan’i Befotaka, Midongy Atsimo, Marondonaky ary Ranomena no notanterahina ny fiofanana mikasika ny fiahiana ara-tsosialy. Nampahafantarina ireo katekista ny tombontsoa ho azy rehefa tafiditra mpikambana, anisan’izany ny fanampiana ny fianakaviana, ny fandraisana an-tanana ny saram-pitsaboana ny aretina sy ny loza ateraky ny asa ary ny fisotroan-dronono ho an’ny zokiolona.
Nandritra ny fiofanana dia noraisina ho mpikambana CNaPS avy hatrany ireo katekista avy amin’ny Fileovana efatra tonga niatrika ny fampianarana ity. Tsy safidy ny fidirana CNaPS fa adidy tsy maintsy hatao amin’ny maha zo fototra azy ka ny mpiasa dia ho afaka hiaina ny fahafinaretam-piainana eo am-panatanterahana ny asany, hoy ny fanazavana. Nivoitra nandritra ny adihevitra anefa ny loharanom-bola entina handoavana ny latsakemboka satria raha tsy misy latsakemboka dia tsy misy fanampiana ho azo. Nampaherezin’ny mpitantana ny CNaPS ireo katekista mba hanitatra ny loharanom-bolany ankoatra ny karama azo avy amin’ny fiangonana. Nanamafy izany rahateo ny prezidà synodalin’ny faritra Atsinanana ny Pastora Andrianjafy Octave Bénil ka nilaza fa : « tokony hatao mitovy ny tadin-dokanga sy ny hevitra dia tafa ny fiahiana ara-tsosialy. Minoa dia miasà, hoy izy teo am-pamaranana.